Andilanatoby-Ambatondrazaka: Lehilahy novonoin’ny jiolahy, takalonaina ny vadiny
mercredi, 04 juillet 2018 20:22
Nitrangana fanafihana mitam-basy tao Andilanatoby ny alin’ny talata hifoha ny alarobia 4 jolay 2018. Tokantrano iray no lasibatr’izy ireo, voasava hatrany amin’ny valindrihana nikarohan’izy ireo ny vola.
Tonga namonjy ny Zandary avy ao Ambodinonoka, saingy nanaovan’ireo jiolahy fangalam-piery. Nifindra nanafika tao Ambodinonoka toerana niaingan’ny Zandary indray mantsy ireo jiolahy.
Maty nofirain’izy ireo tamin’ny fibara ny raim-pianakaviana tao amina tokantrano notafihin’izy ireo, ny vadin’ny maty kosa nentin’ireo jiolahy natao takalonaina. Nisy ny poa-basy rehefa nanenjika ny fokonolona. Nataon’ireo jiolahy teo anelanelany ilay vehivavy ka nampananosarotra ny fanoherana nataon’ny fokonolona hanavotana ilay vehivavy.
Voalaza fa nisy fiara efa niandry ireo jiolahy ka teo vao navotsotr’izy ireo ilay vehivavy. Niazo an’i Tsinjoarivo ilay fiara nitondra ireo jiolahy taorian’izay. Mandeha ny fikarohana ireo nahavanon-doza.